Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha oo war ka Soo saaray Tilaadii Somaliland ay kula dhaqantay Dadka Konfurta ....
HomeWararka MaantaMidowga Musharaxiinta Madaxweynaha oo war ka Soo saaray Tilaadii Somaliland ay kula dhaqantay Dadka Konfurta ….
Golaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ayaa waxaa ay sheegeen inay aad uga xun yihiin xadgudubka lagula kacay dadka Soomaaliyeed ee laga soo raafay magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool.
Qoraal kasoo baxay Golaha ayaa waxaa lagu sheegay in ay kasoo horjeedaan in fal dambiyeed ay dad kooban geysteen loo bartilmaameedsado Bulsho idil, dambi wadareedna loogu ciqaabo heyb iyo degaan ay kasoo jeedaan darteed, isla markaana ay u arkaan in falkaasi uu meel ku dhac ku yahay ,islaanimada, Soomaalinimada, Dimoqraadiyada, xaquuqul Insaanka iyo Sharciyada Caalamiga ah.
Ugu dambeyn Midowga Musharixiinta ayaa ugu baaqay culimada, odayada dhaqanka, aqoonyahanka, indheergaradka iyo waxgaradka ka soo jeeda Somaliland in ay hor istaagaan falkaa gurracan ee dhaawacaya walaalnimada, ehelnimada iyo ummadnimada ka dhaxaysa dadka Soomaaliyeed, iyaga oo u mahad celiyay mas’uuliyiinta & Shacabka isku xilqaamay inay dadkaasi u gurmadaan.
Somaliland ayaa ku dhawaad 2000 oo qof waxaa ay dhawaan kasoo musaafurisay Magaalada laas-Caanood, kuwaas oo haatan ku sugan degaano ka tirsan Puntland iyo Galmudug si ay u gaaraan degaannada ay kasoo jeedaan ee Koonfur Galbeed.
Faah Faahin ka Soobaxaysa Dil ka dhacay Degmada Wadajir ee Gobalka Banaadir